Vaginal Bleaching Mask | Kurwisa Itching | Inobvisa Kunhuhwirira Kusingafadzi - VirginiaCare
zvidimbu 3 4 5 6 7
Iyo Yakavandudzwa Yepedyo Zvizoro Zvekuchikadzi Bleaching Neiyo Yakanyanya Kushanda Vagina Kuchengeta Mask | Yekutanga Mask Kubva kuGerman Kwenzvimbo Yepedyo Nenzvimbo Dzakakosha!
Unoita sei nezvinetso zvepedyo?
Kana uine dzepedyo pigment kusagadzikana uye / kana kuda kupa yako labia yakanaka pingi kutaridzika, VC Chakavanzika-be-Rose Vagina cosmetic Mask.
Iwe unozoshamiswa nezvakada mhedzisiro. Yedu Vagina Mask inogadzirwa neyechisikigo asi inoshanda kwazvo zvigadzirwa zvinonyaradza uye zvinodzivirira kusangana nekukadzi uye zvakanyanya kubvisa zvakashata zvemukati maficha.
Pamusoro uye kutenderedza pubic nzvimbo, iyo mask inopa moisturizes uye inodzoreredza iyo ganda chipingamupinyi kuvandudza zvakanyanya kutaridzika uye kunzwa kweganda.
The T-Yakaumbwa Vagina Mask inogadzirwa zvachose ne collagen. Izvi zvinogona kutakura izvo zvakasikwa zvigadzirwa zvakanangana nekudzika kwakadzika kweganda
pasina kunwa mvura uye izvo zvinoshanda zvinobudirira zvinogona kukudziridza zvazvinoita.
Fomura yakakosha haina:
• OilMafuta eChicherwa
• tArtificial Colors
* Aloe Vera yakabvisa: Aloe Vera gel ine anti-kupisa mhedzisiro, inorwisa mabhakitiriya uye inogona kubvisa kunhuwa munzvimbo yekubereka.
* Vitamin C: Kujekesa marabi
* Collagen: Inogona kutakura iwo maratidziro yakadzika mukati meganda pasina kunwa kwemvura, kuinyorovesa zvakanyanya uye kudiridza iyo T-Nharaunda.
Ingredients: Mvura, Aloe Vera, Herba Patriniae, Collagen, Pomegranate Root, Cnidium Monnieri Fruit Extract, Vitamin C uye Rose Bvisa.
Mhedzisiro uye zvakanakira iyo inoshanda kwazvo Vagina Kuchengeta Mask:
Vhenekesa labia kuti ive yepinki chitarisiko, vhenekera / chena nzvimbo yekubereka uye bvisa kusagadzikana kwemavara.
Kudzivisa kukura kwebhakitiriya, kubvisa kunhuhwirira kusingafadzi, kubvisa kuoma kweVulva uye kuwedzera kunzwisiswa kwepedyo.
Mashandisiro ekushandisa Vagina Kuchengeta Mask nenzira kwayo:
1. Nyatsogeza nzvimbo yepedyo nemvura inodziya.
2. Vhura pasuru uye isa masiki paT-Zone.
3. Bvisa maski mushure memaminetsi makumi maviri nemakumi matatu uye kukwiza muviri mune yakawandisa serum.
4. Pamhedzisiro yakanaka, iyo maski inofanira kushandiswa kanokwana kuita 3-4 pavhiki.
Kwete Chiremba Anoshanya
Tip: Iyo maski inogona zvakare kuiswa pane iyo anus yekukonzeresa kuchenesa anal.